Cebu, ny safidy fizahan-tany hafa ao Filipina | Vaovao momba ny dia
Cebu, ny safidy fizahan-tany hafa any Filipina
Mariela Carril | | Filipina, mpitarika
Tamin'ny talata izahay dia niresaka momba an'i Boracay, iray amin'ireo toerana fizahan-tany mahafinaritra any Filipina. Ity no mkah an'ny fizahan-tany iraisampirenena ary manome ny fampahalalana ilaina rehetra izahay mba hahafahana mandeha avy any Manila mankany amin'ity toerana mahafinaritra an'ny masoandro, morontsiraka, ranomasina mafana ary fialamboly ity.
Fa raha mijery akaiky ny sarintanin'i Filipina ianao dia ho hitanao fa izany koa Zebu. Izy io dia faritany nosy iray ao amin'ny faritra afovoan'i Visayas izay misy nosy lehibe iray ary nosy 160 mahery manodidina azy. Cebu, renivohitra, Io no tanàna tranainy indrindra eto Filipina ary ankehitriny izy dia tanàna maoderina sy mavitrika ary mandroso be. Ary raha manampy morontsiraka any an-danitra ianao amin'izany ... dia manana safidy fizahan-tany hafa any Filipina ianao! Holazainao amin'ny farany hoe iza no tianao.
1 Cebu, renivohitra voalohany ao Filipina
2 Zavatra tokony hatao any Cebu
Cebu, renivohitra voalohany ao Filipina
Talohan'ny nahatongavan'ny Espaniôla, ny nosy dia fanjakana fehezin'ny andriana avy any Sumatra. Ny Espaniola dia ho tonga amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ary nanomboka teo ny tantarany dia ao anatin'ny boky tandrefana.
Ny nosy lehibe, Cebu, dia nosy tery sy lava izay 196 kilaometatra avy any avaratra ka hatrany atsimo ary amin'ny lafiny akaiky indrindra dia zara raha 32 kilaometatra. Manana havoana sy tendrombohitra izy, na dia tsy misy avo loatra aza, ary manodidina azy misy morontsiraka mahafinaritra, haran-dranomasina, nosy hafa ary fiainana anaty rano mahatalanjona. Hankafy azy io tanteraka mila mandeha mandritra ny main-tany ianao, ivelan'ny volana Jona ka hatramin'ny Desambra, ary ny vanim-potoana rivo-doza.
Eo anelanelan'ny volana martsa sy mey dia mafana izy ary afaka mahatratra 36 ºC mora foana, saingy manombatombana izy fa mandritra ny taona dia eo anelanelan'ny 24 sy 34 ºC ny arc mafana. Raha fintinina, ny vanim-potoana ambany dia eo anelanelan'ny Mey sy Jona ary eo anelanelan'ny Septambra sy Oktobra miaraka amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 25 sy 32 ºC sy ny orana. Ny vanim-potoana lehibe dia ny volana aprily, mey ary jona miaraka amin'ny hafanana sy rivotra bebe kokoa, saingy orana kely.
Vidiny ambany, ambany ny fizahan-tany ary tolotra bebe kokoa ao amin'ny fizahan-tany iray sy maro, masoandro bebe kokoa, fety bebe kokoa ary vidiny avo kokoa amin'ny faharoa. Misy ihany koa ny vanim-potoana avo lenta izay Krismasy, Taom-baovao, Taom-baovao Sinoa ary Paka. Kajiany fa miakatra 10 ka hatramin'ny 25% ny vidiny.
Zavatra tokony hatao any Cebu
Ankoatra ny zava-mahasarika voajanahary, izay horesahintsika avy eo, ny tanàna dia mahaliana ary afaka manokana andro vitsivitsy ho azy isika. Ny marika Kristiana sy Espaniola dia hita isaky ny zorony miaraka amina fiangonana, lakroa ary anarana an-dalambe. Ilay Magellan's Cross, ny Basilica madinidinika ao Santo Niño, ny fitoerana masin'i Magallanes ary ny lalambe Colón, ohatra, ny zokiny indrindra ao an-tanàna.
Azonao atao ny mitsidika ny Fort San Pedro, ny Katedraly Metropolitan, ny tempolin'i Tao Tao Cebu, ny trano zezoita, ilay Casa Gorordo taloha sy kanto tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary tranokala fantatra amin'ny hoe Ny tampony izay any Busay ary tsy inona akory fa fomba fijery tsara 12 kilometatra miala ny afovoan-tanàna misy fahitana 180º mahafinaritra.
Raha hivezivezy eran'ny tanàna dia azonao atao ny mampiasa kodiaran-telo miaraka amina mpandeha telo. Pisy Filipina fito no voadidy isaky ny kilometatra. Misy koa multitaxis ary jeepneys maro loko. Tsy misy ny tsy fahampian'ny taxi sy bus mahazatra. Ny vola rehetra dia aloa amin'ny vola eo an-toerana, trano fisakafoanana sy hotely lehibe ihany no mandray carte de crédit.
Ok izao Ary ny morontsirak'i Cebu? Raha hijanona andro vitsivitsy ianao, ny safidy tsara indrindra dia ny tsy mifindra lavitra ny renivohitra. Eo alohany dia ny Nosy Mactan, toeram-pialofana atolotra ary hatsarana voajanahary. Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe Lap Lap y mifandray amin'ny tanàna misy tetezana roa izy io. Nosy be atao izy ity ary amin'ireo tranonkala antsitrika tsara indrindra ao amin'ny faritra.
Eto Mactan no misy ny fifantohan'ireo trano fandraisam-bahiny ary tonga mahitsy ireo mpizahatany manao fitsangatsanganana avy any Manila na Korea na Hong Kong satria manana seranam-piaramanidina iraisampirenena. Mactan dia Nosy haran-dranomasina tsara fialantsasatra. Manodidina azy io ny haran-dranomasina Tambuli sy Kontiki ary ny Toeram-piarovana an-dranomasina ao Hilutungan. Ny torapasika sy ny antsitrika, ny snorkeling ary ny mitaingina sambo no atolotra azy.
Raha momba ny trano fandraisam-bahiny, misy ny zava-drehetra manomboka amin'ny hotely misy teti-bola ka hatrany amin'ny toerana mety ao anaty lisitra raitra Condé Nast Traveler. Tsarovy izany Mactan dia latsaky ny adiny iray avy any Cebu ary 45 minitra avy any Manila tsy misy zavatra hafa. Afaka tonga amin'ny sidina iraisam-pirenena mivantana avy any Narita any Japon ianao, Incheon any Korea Selatan, Singapore na Hong Kong. Saingy tsy miampita mankany amin'ny Nosy Mactan dia misy torapasika hafa atoro ary ny sasany dia any amin'ny nosy hafa.
ny Nosy Camotes Misy efatra amin'izy ireo, Tulang, Pacjian, Poro ary Ponson, ary samy manana torapasika sy hotely mahafinaritra izy rehetra. Mitovy Nosy Badian izay misy toeram-pialan-tsasatra manokana. Eo anelanelan'ny nosy Cebu sy La Leyte no misy ny tsara tarehy Nosy Bohol, fantatra ihany koa ary miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra.
La Nosy Malapascua, nosy mpanarato, dia iray amin'ireo tanjona faratampony ary iray amin'ireo tsiambaratelo indrindra ny Nosy Sumilon. Amin'ny voalohany, ny antsitrika dia ny mpanjaka tanteraka, na dia tsy dia mandroso loatra ho an'ny fizahan-tany aza, angamba fanintonana iray hafa. Tsy misy ATM, eo anelanelan'ny lalànan'ny mponina no misy ny hotely ary tsy ekena na euro na dolara.
Bantayan Nosy Edena misy rano madio mangarahara sy torapasika fotsy izy io. Izy io dia manana ny iray amin'ireo fiangonana tranainy indrindra any Filipina, efa-jato taona ary misy hotely sy trano fandraisam-bahiny marobe izay mety hahavery volana anao. Vidiny? Manomboka amin'ny $ 60 sy miakatra.
Araka ny hitanao, ny tolotra amin'ity faritra eto Filipina ity dia maro kokoa noho ny ao Boracay. Eto ianao dia mila mandamina tena tsara kokoa satria ny nosy tsirairay dia toeran-kaleha. Samy manana trano fandraisam-bahiny izy rehetra ary samy hafa ny tolotr'izy rehetra, saingy amiko izany Raha tianao ny milomano, snorkeling ary milentika any Filipina, ny toerana tsara indrindra rehetra dia i Cebu.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Cebu, ny safidy fizahan-tany hafa any Filipina
Inona no hatao amin'ny ririnina any Frantsa